Magacyada Nebiyada Iyo Luuqadda Ingiriiska (Cabdiwahaab Axmed Cali) | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Magacyada Nebiyada Iyo Luuqadda Ingiriiska (Cabdiwahaab Axmed Cali)
Magacyada Nebiyada Iyo Luuqadda Ingiriiska (Cabdiwahaab Axmed Cali)
Waxa ay shacni iyo karaamo u sugnaatay rabbiga dhulka Abuurray, Aadan Cs- u doortay Aabbaha basharka, Xaawa-na jeexiisa ka beeray, annagana inoo oggolaaday in aan si dhib yar ugu noolaanno dushiisa; sidoo kale waxa ay ammaan iyo duco u sugnaatay Nabiyadii alle u doortay in ay ummaddiisa calan-wallayaal u noqdaan, kheyrkana ku jiheeyaan, caksigana ka weeciyaan.
Waxa aan doonayaa sidoo kale in aan ammaan iyo duco u mariyo nabigii loo doortay in uu soo abyo risaaladii wareegtada ahayd, ee Muxamed nabad gelyo iyo naxariis aan lasoo koobi karin dushiisa ha ahaatee.
Waa faallo nooceeda igu cusub, waxa aan kaga hadli doonaa magacyada Nabiyada iyo Luuqadda Ingiriiska iyo sida ay ku noqonayaan; dhab ahaantii ma ahi qofka mudan in uu qoro qoraal noocan oo kale, sidoo kale xaq u lahaa in uu ku dhiirrado maqaal sidan oo kale ah, maadaama ay yihiin kuwa doodo dhallin kara; hasa yeeshee anigoo og aqoonyarideyda ayaan qalinka u qaatay qoraalkan, saddex sababood awgeed.
1:- Midda koobaad, yaraanteydii xaafaddii aan dagnaa ee aan kusoo barbaaray waxaa la iga oran jira magac-naaneyseedka “Cabdi John” kaas oo mar dambe isku baddalay “Cabdi Jones” iyadoo la igu saminayay xiddiggii Manchester United ee Phil Jones, oo aan taageero u ahaa xilligaas.
Markii ay dhacday in magac-naaneyseedkeyga uu ku seeto wareegay “John Iyo Jones” ayaan go’aansaday in aan ogaado micnaha dhabta ah ee labada magac ay ku fadhiyaan, balse markii aan u kacay baaritaanka waxaa ii soo baxay, wax caqligeyga marnaba aanu ku fakarin oo ahayd in magacyada la i hubiyay ee “John iyo Jones” labaduba ay yihiin magacyo nabi; dhab ahaantii sida aad haddaba ula yaabtay ayaan xilligaas ula yaab iyo amakaag dhabannada qabsaday, hasa yeeshee ugu dambeyn waxaan ku guuleystay in aan aqbalo middaas, waana sabab kamid ah sababaha aan maqaalkan u qoray.
2:- Midda labaad; aqoonta Soomaalida ee dhankaas oo aad u liidata ayaan ku qasbanaaday in aan soo uruurriyo qoraallada iyo waxyaabaha kale ee mawduucan quseeya, halka midda saddexaadna ay tahay dadka intooda badan ka aaminsan magacyada qaar in ay yihiin magacyo gaaleed iyo mid aan u mudneyn in uu qof Muslim ah baxsado ama loo bixiyo, haa. ma qabo in qofka uu baxsado magac uusan aqoon u lahayn, hasa yeeshee si lamid ah middaas wuxuusan xaq u lahayn in uu aflagaadeeyo ama ceebeeyo magac ama wax uusan cilmi u lahayn.
Haddaba qoraalkan uma qorin in aan banneeyo in la baxsado magacyada John, Jones, Jesus iyo kuwa lamidka ah, keliya waxa aan ugu talagalay in wacyiga bulshada ee ku aaddan dhankaas ugu yaraan uu wax ku darsamo, maadaama cilmi ahaanna ay sugan tahay middan.
Inta qormadan aad akhrineyso, waxa aad arki doontaa nebiyo aad taqaanno iyo kuwa aadan weligaa maqal, hasa yeeshee waa kuwa sugan, oo suubbanaheenna ayaa lagu yiri “Nebiya, waa kuwa aan kuu sheegnay iyo kuwa aannan kuu sheegin,” (Nissa Iyo Baqrah).
Nebi kasta waxa aan ka soo qaadaneynaa magaciisa oo af Carabi ah, Luuqadda English-ka sida uu ku noqonayo, micno ahaan wuxuu u taagan yahay, asalka halka laga soo miinguuriyay, iyo waxyaabo lamid ah oo quseeya mawduuca.
Haddaba ka bogasho wacan, qaybta koobaad iyo todobaadkan
1:- آدم= Adam:- Aadan
wuxuu ka kooban yahay laba qaybood oo kala ah Ad+Am, micnihiisuna waa “Dhul” asalka marka aan luuqadda Cibraaniyadda (Hebrew) ga dib ugu celino wuxuu noqonayaa “Aabbihii Dadka (Basharka); wuxuu noolaa inkabadan (1,000) Sanno, waxaa lagu aasay buurtii lagu soo dul dajiyay markii cirka ay kasoo daadagayeen, halka dadka qaarna ay sheegaan in uu ku duugan yahay buurta caanka ah ee Abu Qubeys ee Makka.
2:-نوح= Noah, Nuux
waxaana loogala jeedaa sida ay culimada qaar sheegayaan, “Kii Dagnaa” halka kuwa kalana ay leeyihiin waa “Kii Qaylinayay” oo ay kala jeedaan, midkii u qaylinayay wiilkiisa markii qawmkiisa uu halaagga ku socday, abtirsiimadiisu waa Nuux binu Laamik Binu Mutashalikh Binu Adris Binu Yurad Binu Mahla’iil Binu Qeynaan Binu Anoosh Binu Sheeth Binu Aadam CS; Nabi Muxamed ayaa xaqiijiyay in toban qarni ay u dhaxeysay Aadam CS iyo Nabi Nuux Cs.
3:-إدريس= Enoch, Idriis;
wuxuuna magaciisa u ka dhigan yahay “Kii Dadaalka badnaa!) maadaama uu ahaa qofkii ugu horreyay ee qalinka wax ku qora, sidoo kalena uu xilli dambe alla SWT uu sara qaaday, sida ay culimada qaar qabaan; 865 Sano ayuu cimri ahaan gaaray.
4:-هود= Heber, Huud,
oo u dhigma “Saaxiib” ama erey carbeedka “رفيق” abtirsiinyadiisu waa Huud (Heber) oo aad dhihi karto “عابر” waana mid kamid ah Nebiyadii Carabtii asalka ahayd, sida uu Nebi Muxamed SCW inoo xaqiijiyay xadiiskii Abuu Dar ee ahaa “أربعة أنبياء من العرب هود وصالح وشعيب ونبيُّك
يا أبا ذر” ‘Abuu Darroow waxaa jira afar nebi oo Carab ah, Huud (Caabbir, Heber) Saalix, Shuceyb iyo Nebigaaga (Muxamed), sidaa darteeda Abtiriskiisu waa Huud Binu Shaalix Binu Arfaqshad Binu Saam Binu Nuux Cs, inkabadan 464 oo sano ayuu noolaa, wuxuuna ku duugan yahay Bariga Xadramuut Yemen.
5:- صالح= Methuselah= Saalax
micnaha ereygan wuxuu lamid yahay ereyga “wanaag” oo liddi ku ah “Fasaad” ma qorin buugaagta taariikhda xilligii uu noolaa, hasa yeeshee wuxuu ahaa mid kamid ah nebiyadii qawmkiisu inkireen oo diideen in ay raacaan.
6:- لوط= Lot Luudh,
waa mid kamid ah nebiyada ugu caansan ee sheekadoodu kusoo aroortay Afarta kutub ee samaawiga ah (Injiil,*Gosple* Zabbuur Pslams Tawraad Torah Furqaan, Qur’aan).
7:-إبراهيم= Abraham, Ibraahiim,
wuxuu u qaybsamaa laba erey oo kala ah “Ab+Raham” waxaana lagala jeedaa “Abraxiim” oo micnaheedu yahay “Aabbihii naxariista badnaa”, kahor inta aan la oran magacaas, wuxuu lahaan jiray magacyo kala duwan oo ay kamid tahay “Abram” oo micnaheedu tahay “Aabbihii Reerka”, tafsiir badan ayaa la saaraa magaca Nebi Ibraahim Cs, balse intaas ayaa naga deeqda.
Wuxuu ku dhashay magaalada Uor ee wuqooyiga dalka Ciraaq,1263 oo dabshid kaddib duufaantii Nebi Nuux Cs, wuxuu noolaa 200-sanno, isagoona safarro kala duwan ku tegay qaybo badan oo caalamka kamid ah.
Lasoco Qaybaha Xiga ee Qormooyinka Oo Silsillad noqon doona.
Waxaa Isku Soo aruurriyay oo qoray Cabdiwahaab Axmed Cali